I-China L-valine CAS 72-18-4 yeBanga lokutya (i-AJI USP) abavelisi kunye nabathengisi | Ndiyabulela
Igama lemveliso:: L-Valine
I-L-Valine (Isifinyezo iVal) yenye yee-asidi eziqhelekileyo ezili-18, kunye nenye yee-amino acid ezisibhozo emzimbeni womntu. Ibizwa ngokuba yi-branched chain amino acid (BCAA) ene-L-Leucine kunye ne-L-Isoleucine ngokudibeneyo kuba zonke zinekhonkco lecala le-methyl kulwakhiwo lweemolekyuli.
I-L-Valine yenye ye-aliphatic amino acid phakathi kweentlobo ezingamashumi amabini zeeproteinogenic amino acid kunye ne-branched-chain amino acid (BCAA) isilwanyana ngokwaso esingakwaziyo ukuyidibanisa kwaye kufuneka sithathe ekudleni ukuhlangabezana neemfuno zesondlo; ke ngoko i-valine ye-L kubalulekile kwi-amino acid. Iziphumo eziphambili njengokulandelayo:
(1) Ukongezwa kukutya okuncancisayo kunyusa imveliso yobisi. Indlela yokusebenza kukuba i-L-Valine inokuchaphazela ukuveliswa kwe-alanine kunye nokukhutshwa kwezihlunu, kwaye i-alanine entsha ifumene i-alanine ekunciphiseni i-plasma ekunene inceda izicubu zamabele zihlengahlengise kwimfuno yezinto zokwenza iswekile kwaye ngenxa yoko imveliso yobisi iyenyuka.
(2) Ukuphucula ukusebenza komzimba wezilwanyana. I-L-Valine inokukhuthaza amathambo ezilwanyana T iiseli ukuba zitshintshe zibe ziiseli T ezivuthiweyo. Ukunqongophala kwe-valine kunciphisa isongezo se-C3 kunye namanqanaba e-transferritin, okukuthintela ukukhula kweethymus kunye neepheripheral lymphoid tissue kunye nokubangela ukukhula kokuthintela iiseli ezimhlophe ezingacacanga nezingathathi cala. Nje ukuba ivaline ishiyeke, amantshontsho ahamba kancinci kwaye engenzi nto ngokuchasene nentsholongwane yesi sifo.
(3) Ukuchaphazela amanqanaba endocrine ezilwanyana. Izifundo zibonise ukuba iimazi ezincancisayo kunye nokutya okuncancisayo kweempuku ezongezwe nge-L-valine kunokunyusa ukugxila kweprolactin kunye nokukhula kwehomoni kwiiplasmas zabo.
(4) L-valine ikwayimfuneko ukulungiselela ukulungiswa kwezicubu kunye nokubuyiselwa. Ibizwa ngokuba yi-amino acid okanye i-BCAA eboshwe ngamatyathanga, esebenza kunye nee-BCAA ezimbini ezongezelelweyo ezaziwa njenge-L-Leucine kunye ne-L-Isoleucine.
Egqithileyo I-L-Tryptophan CAS 73-22-3 yeFarma yeBakala (USP)
Okulandelayo: L-Leucine CAS 61-90-5 kwiBakala lokutya (AJI USP)
I-L-Threonine CAS 72-19-5 yeBanga lokutya (FCC / AJI / ...
L-Isoleucine CAS 73-32-5 kwiBakala lokutya (AJI USP ...
I-L-Lysine HCL CAS 657-27-2 yeBakala lokutya (i-FCC / AJ ...
I-L-Valine 72-18-4, L-Threonine Pharm kwiBakala, Ukutya kwezilwanyana, 73-32-5 L-Isoleucine, Ikhemesti yeBakala L-Leucine, L-Threonine kwiBakala lokutya,